ဒီတစ်ပတ်တော့ ပြန်ရေးဖြစ်ပြီပေါ့…စာပြန်ရေးရတာထက် ကစားရတာကိုပဲ ပိုသဘောကျလာတဲ့အခါ စာမရေးဖြစ်တဲ့ သဘောပါ… 😛
ဆော့ဖူးတဲ့ ဂိမ်းတွေထဲမှာ ရင်းနှီးနေတယ်လို့ထင်ရပြီး လွယ်မယ်လို့ထင်ရတဲ့ ဂိမ်းတွေ အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။. ဒါပေမယ့် တကယ်ကစားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ မသိထားတဲ့ အသစ်အသစ်တစ်ချို့ပေးနိုင်တဲ့ ဂိမ်းတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီထဲမှာ meowoof ပါမယ်ထင်တယ်။. Arcade game တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် အေးဆေးပေါ့ပါ့းဆော့လို့ရပါတယ်။ သခင်ပြန်မရောက်လာတဲ့အတွက် ကြိုးချည်ခံထားရတဲ့ ခွေးနဲ့ကြောင် ၂ကောင်က အစာရှာထွက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့။
X-COM ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့လက်ရာဆိုတော့ ပြောစရာသိပ်လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင် wizard တစ်ကောင်ကို စိတ်ကြိုက် လက်နက်ပစ္စည်းတွေတပ်ပေးလို့ရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုက သူ့မှာ တစ်ခြားအကောင်တွေကို ကိုယ့်ဘက်က စစ်ကူအနေနဲ့ ဖန်ဆင်းလို့ရတာမျိုးပါ။ Single player မှာအတော်လေးကစားလို့ကောင်းတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Multiplayer မှာတော့ PvP ပါလာပါတယ်။ ဒလို fantasy ကိစ္စတွေ သေဘောခွေ့ရင်တော့ ဒီဂိမ်းကို ယူထားသင့်တယ်။
ကိုယ့်ဖုန်းကို သုံးပြီး ကိုယ့်ကို စိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ အကောင်းစားဂိမ်းတစ်ခုလို့ပဲပြောရမယ်ထင်တယ်။. puzzle ကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် ဦးစားပေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ feature ကိုယူသုံးထားတဲ့ ဂိမ်းတွေထဲမှာတော့ စိတ်ကူးကောင်းတယ်ပြောရပါမယ်။. ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါ မထင်တဲ့ puzzle တွေကတော့ ကသိကအောက်ဖြစ်စေတယ်ထင်တယ်။
သိပ်မကြာသေးခင်က Returener 77 ကိုဆော့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Returner Zhero ကိုအထွေအထူးမိတ်ဆက်စရာမလိုပါဘူး။ Mobile မှာ အကောင်းဆုံး graphic ထဲကတစ်ခုပဲမဟုတ်လား။. ဒီအကြိမ်မှာတော့ Returner Zhero ရဲ့နေရာကဝင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး timeline မှာတော့ နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။. တစ်ခြားကိစ္စတွေကတော့ ပြောစရာသိပ်မရှိလှပါဘူး။. Puzzle တွေမှာတော့ အရင်အတိုင်း ခက်တာနဲ့ လွယ်တာရောထားပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်းပြောရရင် third chapter ကတကယ်အကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်။
Early Access ဆိုပေမယ့် gamer တစ်ချို့တော့ ရောက်နေကြပြီးပါပြီ။ 3v3 battle arena ဖြစ်ပြီးတော့ ပွဲမစခင်ရွေးချယ်စရာ လက်နက်အမျိုးအစား များပါတယ်။ Shooter အများစုရဲ့ ပုံမှန်အတိုင်း လက်နက် ၂မျိုးကိုင်ခွင့်ရပြီးတော့ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း kill အများဆုံးရတဲ့အဖွဲ့ကနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပွဲစရင်တော့ လက်နက်ပြန်ပြောင်းလို့မရတဲ့အတွက် အပြင်မှာကတည်းက လက်နက်ကိုသေချာရွေးသွားဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိတော့ shooter ကိုအခုမှစကစားတဲ့ သူမဟုတ်ရင် လက်နက် အတော်များများက အဆင်ပြေပါတယ်။ unlockable တွေလည်းရှိပြီးတော့ အများစုက $ ပေးဝယ်စရာမလိုပါဘူး။ တစ်ခုပဲ tutorial မတွေ့မိဘူး။
အမှန်အတိုင်း မကွယ်မဝှက်ပြောရရင် ဒီလို တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ဇောက်ထိုးမိုးမျော်ဆင်းဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်လို ပေါင် ၂၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ချာတိတ်တစ်ယောက်အတွက်ဆို ဖုန်းထဲမှာက စိတ်အချရဆုံးပဲမဟုတ်လား။ Developer ကလည်း အတော်လေး သိတတ်ရှာပါတယ်။ one finger game အဖြစ်နဲ့ပါထုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်။ ပခုံးပေါ်ကကျော်ကြည့်ရတဲ့ မြင်ကွင်းမှာ ကိုယ်ကဂရုစိုက်ရတာဆိုလို့ စက်ဘီးပေါ်က အနေအထားလေးပဲဆိုတော့ ဒီဂိမ်းကလောလောဆယ် x-treme game တွေထဲမှာတော့ အသက်သာဆုံးပါပဲ။ ပြီးတော့ အကြာကြီး ကစားသင့်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ပျင်းလာလိမ့်မယ်။
Multiplayer focus ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခြား gamer တွေရဲ့ ghost နဲ့ ယှဉ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် repetative ဖြစ်တယ်လိုမခံစားရခင်အထိတော့ league တွေကပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
Gamevil ရဲ့ MMORPG အသစ် Talion ကဒီလ ၁၂ရက်နေ့မှာ SEA တအတွက်ထွက်ပြီပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ မဆော့ရသေးပါဘူး။ auto battle ဆိုတော့ mobile junk မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ character customization လေးသဘောကျလို့… အဟိ…
ဒီတဈပတျတော့ ပွနျရေးဖွဈပွီပေါ့…စာပွနျရေးရတာထကျ ကစားရတာကိုပဲ ပိုသဘောကလြာတဲ့အခါ စာမရေးဖွဈတဲ့ သဘောပါ… 😛
ဆော့ဖူးတဲ့ ဂိမျးတှထေဲမှာ ရငျးနှီးနတေယျလို့ထငျရပွီး လှယျမယျလို့ထငျရတဲ့ ဂိမျးတှေ အမြားကွီးရှိပါလိမျ့မယျ။. ဒါပမေယျ့ တကယျကစားကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ မသိထားတဲ့ အသဈအသဈတဈခြို့ပေးနိုငျတဲ့ ဂိမျးတှရှေိနပေါသေးတယျ။ ဒီထဲမှာ meowoof ပါမယျထငျတယျ။. Arcade game တဈခုဖွဈတဲ့အတှကျ အေးဆေးပေါ့ပါ့းဆော့လို့ရပါတယျ။ သခငျပွနျမရောကျလာတဲ့အတှကျ ကွိုးခညျြခံထားရတဲ့ ခှေးနဲ့ကွောငျ ၂ကောငျက အစာရှာထှကျတဲ့ ဇာတျလမျးလေးပေါ့။
X-COM ကိုထုတျခဲ့တဲ့သူတှရေဲ့လကျရာဆိုတော့ ပွောစရာသိပျလိုမယျမထငျပါဘူး။ ကိုယျပိုငျ wizard တဈကောငျကို စိတျကွိုကျ လကျနကျပစ်စညျးတှတေပျပေးလို့ရပါလိမျ့မယျ။ စိတျဝငျစားစရာတဈခုက သူ့မှာ တဈခွားအကောငျတှကေို ကိုယျ့ဘကျက စဈကူအနနေဲ့ ဖနျဆငျးလို့ရတာမြိုးပါ။ Single player မှာအတျောလေးကစားလို့ကောငျးတာတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ Multiplayer မှာတော့ PvP ပါလာပါတယျ။ ဒလို fantasy ကိစ်စတှေ သဘေောခှရေ့ငျတော့ ဒီဂိမျးကို ယူထားသငျ့တယျ။
ကိုယျ့ဖုနျးကို သုံးပွီး ကိုယျ့ကို စိတျဒုက်ခပေးတဲ့ အကောငျးစားဂိမျးတဈခုလို့ပဲပွောရမယျထငျတယျ။. puzzle ကောငျးကောငျးကွိုကျတဲ့ သူတှအေတှကျ ဦးစားပေး ဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးရဲ့ feature ကိုယူသုံးထားတဲ့ ဂိမျးတှထေဲမှာတော့ စိတျကူးကောငျးတယျပွောရပါမယျ။. ဒါပမေယျ့ တဈခါတဈခါ မထငျတဲ့ puzzle တှကေတော့ ကသိကအောကျဖွဈစတေယျထငျတယျ။
သိပျမကွာသေးခငျက Returener 77 ကိုဆော့ဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျတော့ Returner Zhero ကိုအထှအေထူးမိတျဆကျစရာမလိုပါဘူး။ Mobile မှာ အကောငျးဆုံး graphic ထဲကတဈခုပဲမဟုတျလား။. ဒီအကွိမျမှာတော့ Returner Zhero ရဲ့နရောကဝငျကစားရမှာဖွဈပွီး timeline မှာတော့ နညျးနညျးလေးရှုပျထှေးနတေယျလို့ထငျပါတယျ။. တဈခွားကိစ်စတှကေတော့ ပွောစရာသိပျမရှိလှပါဘူး။. Puzzle တှမှောတော့ အရငျအတိုငျး ခကျတာနဲ့ လှယျတာရောထားပေးတာတှရေ့ပါတယျ။ စိတျထဲရှိတဲ့ အတိုငျးပွောရရငျ third chapter ကတကယျအကောငျးဆုံးလို့ထငျတယျ။
Early Access ဆိုပမေယျ့ gamer တဈခြို့တော့ ရောကျနကွေပွီးပါပွီ။ 3v3 battle arena ဖွဈပွီးတော့ ပှဲမစခငျရှေးခယျြစရာ လကျနကျအမြိုးအစား မြားပါတယျ။ Shooter အမြားစုရဲ့ ပုံမှနျအတိုငျး လကျနကျ ၂မြိုးကိုငျခှငျ့ရပွီးတော့ သတျမှတျခြိနျအတှငျး kill အမြားဆုံးရတဲ့အဖှဲ့ကနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ပှဲစရငျတော့ လကျနကျပွနျပွောငျးလို့မရတဲ့အတှကျ အပွငျမှာကတညျးက လကျနကျကိုသခြောရှေးသှားဖို့တော့ လိုပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျအထိတော့ shooter ကိုအခုမှစကစားတဲ့ သူမဟုတျရငျ လကျနကျ အတျောမြားမြားက အဆငျပွပေါတယျ။ unlockable တှလေညျးရှိပွီးတော့ အမြားစုက $ ပေးဝယျစရာမလိုပါဘူး။ တဈခုပဲ tutorial မတှမေိ့ဘူး။
အမှနျအတိုငျး မကှယျမဝှကျပွောရရငျ ဒီလို တောငျကုနျးပျေါကနေ စကျဘီးတဈစီးနဲ့ ဇောကျထိုးမိုးမြျောဆငျးဖို့ဆိုတာ ကိုယျ့လို ပေါငျ ၂၀၀ လောကျရှိတဲ့ ခြာတိတျတဈယောကျအတှကျဆို ဖုနျးထဲမှာက စိတျအခရြဆုံးပဲမဟုတျလား။ Developer ကလညျး အတျောလေး သိတတျရှာပါတယျ။ one finger game အဖွဈနဲ့ပါထုတျပေးလိုကျသေးတယျ။ ပခုံးပျေါကကြျောကွညျ့ရတဲ့ မွငျကှငျးမှာ ကိုယျကဂရုစိုကျရတာဆိုလို့ စကျဘီးပျေါက အနအေထားလေးပဲဆိုတော့ ဒီဂိမျးကလောလောဆယျ x-treme game တှထေဲမှာတော့ အသကျသာဆုံးပါပဲ။ ပွီးတော့ အကွာကွီး ကစားသငျ့တဲ့ ဂိမျးတဈခုမဟုတျပါဘူး။ ပငျြးလာလိမျ့မယျ။
Multiplayer focus ဖွဈတဲ့အတှကျ တဈခွား gamer တှရေဲ့ ghost နဲ့ ယှဉျရပါလိမျ့မယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ repetative ဖွဈတယျလိုမခံစားရခငျအထိတော့ league တှကေပြျောဖို့ကောငျးပါတယျ။
Gamevil ရဲ့ MMORPG အသဈ Talion ကဒီလ ၁၂ရကျနမှေ့ာ SEA တအတှကျထှကျပွီပွောပါတယျ။ ကြှနျတျောတော့ မဆော့ရသေးပါဘူး။ auto battle ဆိုတော့ mobile junk မဖွဈပါစနေဲ့လို့ ဆုတောငျးပါတယျ။ character customization လေးသဘောကလြို့… အဟိ…
Tags android iOS mobile newrelease trailer videos weekly